အတုယူစရာ သန်းကြွယ်သူဌေးတို့၏ အမူအကျင့်(၅)ခု – Gentleman Magazine
အတုယူစရာ သနျးကွှယျသူဌေးတို့၏ အမူအကငျြ့(၅)ခု
သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါသလား? သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် လက်ရှိ သန်းပေါင်းများစွာ ချမ်းသာကြွယ်ဝနေသူတွေကို လေ့လာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်တွေအတိုင်း ကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင် သင်လည်းပဲ ဂဏန်းခုနှစ်လုံးပိုင်ဆိုင်မှုကို ရရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူအများစု လုပ်ဆောင်လေ့မရှိပဲ သန်းကြွယ်သူဌေးတွေပဲလုပ်ဆောင်လေ့ရှိတဲ့ အမူအကျင့်(၅)ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လူအများစုက အောင်မြင်ချမ်းသာမှုကို ထီပေါက်သလိုအလွယ်ကလေးနဲ့ ရရှိမယ်လို့ ထင်နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်း ထီပေါက်ပြီးချမ်းသာလာတဲ့ လူတွေရဲ့ (၉၀)ရာခိုင်နှုန်းဟာ အချိန်(၅)နှစ်အတွင်းမှာ ဒုံရင်းဘ၀ကို ပြန်ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ သန်းကြွယ်သူဌေးတွေကတော့ အောင်မြင်မှုမှာ ဖြတ်လမ်းမရှိဘူးဆိုတာကို သိထားကြပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက် အလုပ်ကြိုးစားရုံကလွဲပြီး တခြားမရှိပါဘူး။ အလုပ်ကို ရှေ့တန်းတင်ထားတာက ထိုက်တန်တဲ့ရလဒ်တွေကို ရရှိမှာ သေချာပါတယ်။
အလုပ်ကြိုးစားရုံနဲ့အဆင်ပြေမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မှန်ကန်တဲ့အရေးကိစ္စပေါ်မှာ ကြိုးကြိုးစားစားဆောင်ရွက်တတ်ဖို့ လိုပါသေးတယ်။ လူတိုင်းက ချမ်းသာချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲ အာရုံမစိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင် အောင်မြင်မှုရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်နယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုတည်းကိုပဲ အာရုံစိုက်နိုင်သူတွေသာ ထိပ်ဆုံးကိုရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ စွန့်လွှတ်စွန့်စားဖို့ ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂရုစိုက်တတ်ကြတယ်။
ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ချဉ်းကပ်ပြီဆိုတာနဲ့ စွန့်စားရမယ့် ကိစ္စတွေကို ခေါင်းထဲထည့် စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မစွန့်စားသင့်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ သေချာတွက်ချက်ပြီးမှ စွန့်စားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စွန့်စားရမယ့် ပမာဏနဲ့ ပြန်ရမယ့် ရလဒ် အချိုးကျမှုရှိမရှိကို သေချာဆန်းစစ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အကျိုးရလဒ်ထဲ ပေးဆပ်ရမယ့် ပမာဏများနေရင် နောက်ဆုတ်နေလိုက်ပါ။ ဆုံးရှုံးနိုင်ချေ ပမာဏထက် အကျိုးရလဒ် ရနိုင်ချေပိုများနေမယ်ဆိုရင်တော့ အခွင့်အလမ်းလို့ မြင်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
Bill Gates, Warren Buffett, Carl Icahn နဲ့ Ken Langore တို့လို အပေးအကမ်းရက်ရောတဲ့ ဘီလျံနာတွေဆီက ပညာယူတတ်မယ်ဆိုရင် ပေးဆပ်ခြင်းဟာ ရယူခြင်းထက် ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကို သိလာပါလိမ့်မယ်။
၅။ လေ့လာသင်ယူမှုကို ဘယ်တော့မှ မရပ်တန့်လိုက်ကြဘူး။
သန်းကြွယ်သူဌေးတွေအားလုံးက သူတို့ရဲ့ အရည်အချင်းတွေ တိုးတက်နေဖို့နဲ့ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အတွင်းမှာ ရှေ့ဆုံးက ဦးဆောင်နေနိုင်ဖို့အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူနေတတ်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က စာအုပ်တွေဖတ်၊ မှတ်တမ်းတွေကြည့်၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတွေကို လေ့လာပြီး သတင်းအချက်အလက် ရနိုင်မယ့်သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာတွေ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ အသိပညာဟာ စွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံထားကြပြီး စွမ်းအားရနိုင်သမျှ စုဆောင်းနေတတ်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိ သင့်ဘ၀ အခြေအနေက ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ။ တစ်ချိန်မှာ သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့အတွက် အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို ဒီနေ့ပဲ စလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
သနျးကွှယျသူဌေးတဈယောကျဖွဈခငျြပါသလား? သနျးကွှယျသူဌေးတဈယောကျဖွဈခငျြတယျဆိုရငျ လကျရှိ သနျးပေါငျးမြားစှာ ခမျြးသာကွှယျဝနသေူတှကေို လလေ့ာကွညျ့ဖို့လိုပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာ ဘဏ်ဍာရေးအခွအေနေ ဘယျလိုပဲဖွဈနပေါစေ သနျးကွှယျသူဌေးတဈယောကျရဲ့ အမူအကငျြ့တှအေတိုငျး ကငျြ့ကွံနထေိုငျနိုငျမယျဆိုရငျ သငျလညျးပဲ ဂဏနျးခုနှဈလုံးပိုငျဆိုငျမှုကို ရရှိလာနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ လူအမြားစု လုပျဆောငျလမေ့ရှိပဲ သနျးကွှယျသူဌေးတှပေဲလုပျဆောငျလရှေိ့တဲ့ အမူအကငျြ့(၅)ခုကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
လူအမြားစုက အောငျမွငျခမျြးသာမှုကို ထီပေါကျသလိုအလှယျကလေးနဲ့ ရရှိမယျလို့ ထငျနတေတျကွပါတယျ။ တကယျတမျး ထီပေါကျပွီးခမျြးသာလာတဲ့ လူတှရေဲ့ (၉၀)ရာခိုငျနှုနျးဟာ အခြိနျ(၅)နှဈအတှငျးမှာ ဒုံရငျးဘဝကို ပွနျရောကျသှားတတျပါတယျ။ သနျးကွှယျသူဌေးတှကေတော့ အောငျမွငျမှုမှာ ဖွတျလမျးမရှိဘူးဆိုတာကို သိထားကွပါတယျ။ ရညျမှနျးခကျြတှအေောငျမွငျဖို့အတှကျ အလုပျကွိုးစားရုံကလှဲပွီး တခွားမရှိပါဘူး။ အလုပျကို ရှတေ့နျးတငျထားတာက ထိုကျတနျတဲ့ရလဒျတှကေို ရရှိမှာ သခြောပါတယျ။
အလုပျကွိုးစားရုံနဲ့အဆငျပွမှောတော့ မဟုတျပါဘူး။ မှနျကနျတဲ့အရေးကိစ်စပျေါမှာ ကွိုးကွိုးစားစားဆောငျရှကျတတျဖို့ လိုပါသေးတယျ။ လူတိုငျးက ခမျြးသာခငျြကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လမျးကွောငျးတဈခုတညျးကိုပဲ အာရုံမစိုကျနိုငျဘူးဆိုရငျ အောငျမွငျမှုရရှိမှာမဟုတျပါဘူး။ ဘယျနယျပယျမှာပဲဖွဈဖွဈ တဈခုတညျးကိုပဲ အာရုံစိုကျနိုငျသူတှသော ထိပျဆုံးကိုရောကျလာကွတာဖွဈပါတယျ။
၃။ စှနျ့လှတျစှနျ့စားဖို့ ကိစ်စတှနေဲ့ပတျသကျပွီး ဂရုစိုကျတတျကွတယျ။
ခမျြးသာကွှယျဝမှုကို တညျဆောကျနိုငျဖို့ လမျးကွောငျးတဈခုကို ခဉျြးကပျပွီဆိုတာနဲ့ စှနျ့စားရမယျ့ ကိစ်စတှကေို ခေါငျးထဲထညျ့ စဉျးစားရမှာဖွဈပါတယျ။ မစှနျ့စားသငျ့ဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတျပါဘူး။ သခြောတှကျခကျြပွီးမှ စှနျ့စားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ စှနျ့စားရမယျ့ ပမာဏနဲ့ ပွနျရမယျ့ ရလဒျ အခြိုးကမြှုရှိမရှိကို သခြောဆနျးစဈနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။ အကြိုးရလဒျထဲ ပေးဆပျရမယျ့ ပမာဏမြားနရေငျ နောကျဆုတျနလေိုကျပါ။ ဆုံးရှုံးနိုငျခြေ ပမာဏထကျ အကြိုးရလဒျ ရနိုငျခပြေိုမြားနမေယျဆိုရငျတော့ အခှငျ့အလမျးလို့ မွငျတတျဖို့ လိုပါတယျ။
Bill Gates, Warren Buffett, Carl Icahn နဲ့ Ken Langore တို့လို အပေးအကမျးရကျရောတဲ့ ဘီလြံနာတှဆေီက ပညာယူတတျမယျဆိုရငျ ပေးဆပျခွငျးဟာ ရယူခွငျးထကျ ပိုကောငျးတယျဆိုတာကို သိလာပါလိမျ့မယျ။
၅။ လလေ့ာသငျယူမှုကို ဘယျတော့မှ မရပျတနျ့လိုကျကွဘူး။
သနျးကွှယျသူဌေးတှအေားလုံးက သူတို့ရဲ့ အရညျအခငျြးတှေ တိုးတကျနဖေို့နဲ့ သကျဆိုငျရာနယျပယျအတှငျးမှာ ရှဆေုံ့းက ဦးဆောငျနနေိုငျဖို့အတှကျ စဉျဆကျမပွတျလလေ့ာသငျယူနတေတျသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့က စာအုပျတှဖေတျ၊ မှတျတမျးတှကွေညျ့၊ ပညာရပျဆိုငျရာ အကွောငျးအရာတှကေို လလေ့ာပွီး သတငျးအခကျြအလကျ ရနိုငျမယျ့သူတှနေဲ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျတာတှေ လုပျတတျကွပါတယျ။ အသိပညာဟာ စှမျးအားတဈခုဖွဈတယျဆိုတာကို လကျခံထားကွပွီး စှမျးအားရနိုငျသမြှ စုဆောငျးနတေတျကွသူတှဖွေဈပါတယျ။
အခုလကျရှိ သငျ့ဘ၀ အခွအေနကေ ဘယျလိုပဲဖွဈနပေါစေ။ တဈခြိနျမှာ သနျးကွှယျသူဌေးတဈယောကျ ဖွဈလာဖို့အတှကျ အပွောငျးအလဲတဈခုကို ဒီနပေဲ့ စလုပျကွညျ့လိုကျပါ။
Previous: အတိုင်ပင်ခံဆရာတစ်ယောက်နဲ့ လက်တွဲနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းများ
Next: တစ်ဦးတည်း ဆိတ်ငြိမ်စွာ တွေးခေါ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ